Inyanga yomhlaza yelanga i-Aquarius: Ubuntu boMntu - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Inyanga yomhlaza yelanga i-Aquarius: Ubuntu boMntu
Inyanga yomhlaza yelanga i-Aquarius: Ubuntu boMntu
Abo bazalwa benelanga labo e-Aquarius kunye neNyanga yabo kwiCancer zizidalwa ezinovakalelo nezikrelekrele ezikwaziyo ukuza nezimvo ezininzi zokuyila. Bafumana amandla abo kwiminqweno yabo kunye nenyaniso yokuba bafuna ukwenza umhlaba ube yindawo engcono.
Kwangelo xesha, bafuna usapho kunye nekhaya elitofotofo apho banokubuyela khona emva kosuku olude emsebenzini. Ayilulo olo tshintsho nokungayithobeli imigaqo ayenzi ukuba intliziyo yazo itsibe ukubetha. Kodwa bafuna ukhuseleko lobomi obuzolileyo.
Indibaniselwano yeNyanga yoMhlaza weLanga ye-Aquarius ngokufutshane:
Iimpawu: Yomelele, iyakholisa kwaye inamandla
Izinto ezingalunganga: Ukungathembeki, ukungazithembi nokungazithembi
Iqabane eligqibeleleyo: Umntu oza kumnceda enze ikhaya elihle
Ingcebiso: Kulumkele ukophula imithetho kunye nokuthatha umngcipheko.
Abanangxaki yokucinga ngekamva okanye ukuba novelwano. Njengokuba kunjalo, ezi zinto zibonakalisa kakuhle kakhulu. Bahlala besokola ukukhetha phakathi kwezinto abaziqhelileyo kunye neendlela zabo eziqhubela phambili.
I-Aquarius Sun Cancer Moon abantu babona abanye ngendlela abebenokuzibona ngayo. Bayayazi imida yabo kwaye banokungazithembi ngokubhekisele kubuchule babo. Bayamkela, banovelwano kwaye banomonde kwabanye.
Abantu banokubona ukuba bathembekile kwaye bayalithanda icala labo lothando. Ungayichazanga indlela abaziva bekhululekile ngayo xa bekunye nabo kuba nabo kulula. Aba bemi baphakathi kwabona bantu bacingayo, banomdla kwaye baphendula abantu kwi-zodiac.
Bahlukanisiwe kwaye banobukrelekrele obukhulu, njenge-Aquarius ibaphembelela ukuba babe njalo. Kodwa icala labo loMhlaza libenza banyamezele ngakumbi, iimvakalelo kwaye bamkele iimvakalelo zabanye abantu. Ngokwemvelo, ukuqonda kunye nobukhali, baya kuhlala bebaxabisa abantu abanentliziyo entle.
Umhlaza wenyanga uthanda ukuhamba kunye nokwenza abahlobo abatsha. Zizidalwa ezinobuhlobo ezinokubamba amaqela amakhulu. Kodwa oku akuthethi ukuba abanakonwabela ixesha elithile bodwa ukuqokelela iingcinga zabo.
Emva kwayo yonke loo nto, ilizwe labo elingaphakathi linomdla kwaye kufuneka banxibelelane nalo. Uninzi luya kucinga ngabo njengonamathela, kodwa luhlobo nje olunoxolo olukhetha imovie okanye isidlo sangokuhlwa endaweni yeklabhu.
Ubusuku obuzolileyo buya kubanceda bagcwalise kwakhona iibhetri zabo ezingenanto kuba amanqanaba abo amandla anokuhla kakhulu ngamanye amaxesha. Yinto eqhelekileyo ukuba basebenze kakhulu kangangexesha elithile nasemva kokuphumla nje okwexeshana.
Abahlobo babo abakuva kubo kangangeeveki ngamanye amaxesha. Ungasathethi ke bayathanda ukubuyela umva phantsi kweqokobhe labo xa becaphukile. Abo basondeleyo kubo kufuneka bazigwebele ngokwabo xa kufuneka benze into yokubonwabisa kunye nexesha lokubavumela.
Abantu abanendibaniselwano yeLanga yeNyanga baya kuthi bawasebenzise onke amandla abo bencedisa abanye kuba bathanda ukunika ukubaluleka kweengxaki zabantu kunezabo. Banovelwano kwaye bayakwazi ukuzivumelanisa neemeko.
Intuition yabo ibanceda baqonde uninzi lwabahlobo babo. Bakhululekile kuye nakubani na kwaye ngekhe ubabone benekratshi okanye bengakhathali. Kuyamangalisa ukubona ezi ngcinga zomthonyama zisebenza.
ungajola njani nomfazi we-aquarius
Amaphupha abo aya kuzaliseka kuba bayazi ukuba basebenza njani kubo. Kwaye baphupha kakhulu. Kuqhelekile ukuba babambe kwizinto ezibakhathazayo. Kwaye oku kunokubangela ezinye iingxaki kwibhalansi yazo.
Konke kubuyela umva xa babesengabantwana kwaye befuna okona kukhuthazwayo okanye ukuziva ukhuselekile. Nangona kunjalo, banelisekile ngokwaneleyo ukuba bayenze njengabantu abadala.
Basenokufuna ukuphuma kwigobolondo labo lokukhusela amaxesha ngamaxesha kuba ubomi abunakuba lonke ixesha likhuselekile. Yintoni eya kubangela ukuba baphume kwindawo yabo yokuthuthuzela iya kuba yinto ebanceda ukuba benze izinto ngokwahlukileyo kwaye baphuhle.
Aba bemi basemzini babonakala benonxibelelwano olungaqhelekanga kunye nexesha lokukhulelwa kwaye baziva bonwabile kwimeko yomntwana. Kwaye kunokuthiwa ubomi ngamanye amaxesha kubandakanya lonke uhlobo lokuzalwa kwakhona. Umhlaza wenyanga uya kuva lonke uhlobo lweengxaki ezikhoyo kwaye uziqhelanise nemozulu okanye iimeko ezintsha.
Bamele bakujonge oku kuzalwa njengeentsikelelo, hayi njengoxanduva. Ukufumana amava kangangoko kunokwenzeka kuya kubanceda bandise iingqondo zabo. Ubomi babo abusoze babuyele kwindlela obabuyiyo xa bengakhange basebenzise ukhathalelo emhlabeni.
Abemi base-Aquarius Sun Cancer Moon kufuneka bathembele kwikamva kwaye bajonge iindawo zabo ezintsha abanethemba. Ama-Aquarians afumana intuthuzelo kunye nokukhuseleka ekunxibelelaneni nabanye. Ixesha labo elidlulileyo alinakukhathalela.
Banomdla kwaye banomdla ngokwaneleyo ukuba bafumane inkxaso kuye wonke umntu. Ukuba bebengakhuthazwa njengabantwana, ngokuqinisekileyo baya kuba xa sele bebadala. Akukho mntu unokubanqanda ekubeni babe nolwazi kwaye bazimisele kangangoko. Inyaniso yokuba baneNyanga yabo kuMhlaza ibenza ukuba bangakhuseleki ngakumbi kwaye bangonqeni.
Abemi abangamadoda abaneli candelo baya kuzama ukukufihla ukuba semngciphekweni kwabo phantsi kwemaski yamehlo. Ayinamsebenzi nokuba ngabafazi okanye amadoda, baya kuhlala be-eccentric kwaye becinga kakhulu. Umhlaza waziwa ngokuba paranoid ngamanye amaxesha.
loluphi uphawu olungu-aug 28
Kubalulekile ukuba impilo yemveli yeli lizwe ihlehle amaxesha ngamaxesha. Kodwa akukho mfuneko yokuba bacinge ukuba boyisiwe xa berhoxa. Kwaye akufuneki nokuba bazihlukanise. Banokuphepha kuphela ezona ngcinga zabo zingalunganga ngokuhlala.
Abantu abaneLanga labo kwi-Aquarius kunye neNyanga yabo kwiCancer baya kuhlala bejonge ukophula imithetho xa kufikwa kuthando kunye nokugubungela ukudubula kwabo ngokweemvakalelo.
Isimo sabo sengqondo siyekelele kwaye indlela yabo yokucinga isengqiqweni kakhulu. Iqabane labo liyakufumana kunzima ukujongana nabo kuba kuhlala kubonakala ngathi abanazimvakalelo.
Awusoze ubabone aba bemi bevakalisa uthando lwabo. Bajonga ubomi kunye nobudlelwane ngendlela engaqhelekanga. Ayikuko ukuba abanalo uthando okanye abanyanisekanga. Bazimele nje.
Unokuqiniseka ukuba bayathandana nje ukuba bazibophelele emntwini. Umhlaza wenyanga uyaguquka kwaye unokutshintsha ukusuka ekukhuliseni uye kubuntwana ngomzuzwana. Kungenxa yoko le nto bafuna iqabane elisezantsi emhlabeni elinokuthi liziqonde.
Aba bemi bomhlaba abanakubonakala ngathi abanako ukuyigcina kunye. Abazi ukuba ukuphola kuthetha ntoni kuba ukukhathalela amaqabane abo kuya kubonwabisa.
Baziva bonwabile xa benethuba lokuba ngabomama, kodwa kufuneka banakekelwe nabo kwaye oku kuya kubonakala ngakumbi njengoko ubudlelwane buqhubeka.
Indoda yeAcarius Sun yomhlaza wenyanga
Ngenxa yokuba iLanga alomelelanga kwaphela e-Aquarius, kodwa iNyanga ilungile ekhaya eCancer, indoda enolu dibaniso lweNyanga yeLanga ihlala ilawulwa ziimvakalelo zayo kwaye incinci kunabanye abantu base-Aquarians.
Nangona kunjalo, usayixabisile inkululeko yakhe, kwaye uyayitshata nemvakalelo kunye nokucinga kweCrab. Bephenjelelwa ngabanye, aba bantu bemveli baya kuhlala betshintsha kwaye baya kuba nomdla wokuhamba-hamba.
Ziyaphendula kwimekobume kwaye zikhawuleza ukusabela kwiimfuno zabanye abantu. Intuition yabo iya kuhlala ibakhokela. Zonke ezi zinto zibenza badume kwaye babe ngabahlobo nabaninzi.
Uphawu lweZodiac ngoJanuwari 1
Ukutsala, ububele nobabalo, amadoda e-Aquarius Sun Cancer Moon aya kunika ingqalelo enkulu kubomi babo boluntu. Ngenxa yokuba batyala imali eninzi kumashishini abawaqhubayo, baya kuthi benze imali eninzi. Emva koko, bakhuthele kwaye bathetha kakuhle.
Ukungathethi nto banokubona xa umntu elele kude. Ngenxa yokuba bachaphazeleka nguMhlaza, bahlala beziva izinto kunokuba bacinge nzulu ngazo. Kodwa ziya kuhlala ziyinyani kwaye lonke ixesha liqinisekile.
Uyalazi ixesha lokunika okona kulungileyo kwaye benza iinginginya ezinkulu. Iitalente zabo kunye nokuhlalisana nabo kuya kubanceda ukuba bafumane impumelelo kwiinkalo ezininzi zomsebenzi. Eyona nto yenza ukuba le ndoda ibaluleke kangaka kukuba bayabuqonda ubuthathaka bomntu kunye nobunzima.
Umfazi we-Aquarius Sun Cancer Moon
Umfazi we-Aquarius Sun Cancer Moon ngokungathandabuzekiyo unomdla kwaye uyile. Ufuna ukukhululeka kwaye ajikeleze ngoba uyi-Aquarius kodwa unemvakalelo kwaye uqhelekile kuba umhlaza wakhe wenyanga unomthelela kuye.
Yomelele, iyakholisa kwaye inamandla, inkuthazo yeli nenekazi iya kulinceda liphumelele phantse kuyo yonke into eliziphakamisela yona.
Unokusebenzisa iimvakalelo zakhe ngendlela enemveliso ukuba ulumkile. Kodwa akakwazi ukuziqhelanisa ngokulula nabantu abatsha kunye neemeko. Luhlobo oluqinileyo olungaboniyo enye indlela kodwa eyakhe.
Unomdla kuphela ekunyanisekeni nasekuvulekeni, uchanekile kwaye kunqabile ukuba enze iimpazamo. Uphupha kakhulu kwaye uzimisele kakhulu. Abantu bayakuxabisa ukuba impumelelo yakhe yafunyanwa kukusebenza nzima.
Ukuphantsi komhlaba kunye nokufuna ukwazi, umfazi we-Aquarius Sun Cancer Moon ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha angabonakala engxamisekileyo. Izimvo zakhe zinokuvakala zirhabaxa, kodwa usaya kuthatha inyathelo.
Kunzima ukumqinisekisa ngento ethile. Ukuba ufuna ukonwaba, ukuphumla kunye nokuzikhusela kuxinzelelo kunokumnceda kakhulu.
Inyaniso yokuba unamabhongo kakhulu anokuchaphazela impilo yakhe ngendlela embi. Ukuhlekisa ngakumbi ngekhe kwenzakalise nabani na. Ngendlela yakhe, eli nenekazi liya kuphumelela kwaye liseluxolweni kunye naye kunye nokuqonda kwakhe.
Inyanga kwiNkcazo yoMhlaza
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neeMpawu
Umdlalo ogqwesileyo we-Aquarius: Ngubani ohambelana kakhulu naye
Uhlalutyo olunokuqondwa ukuba lithetha ntoni ukuba yi-Aquarius
Julayi 17 Imihla yokuzalwa
NgoFebruwari 23 Imihla yokuzalwa
ungayixelela njani ukuba indoda eyintombi iyakuthanda
uphawu lweenkwenkwezi ngomatshi 26
xa ilibra yenzakele
nguwuphi umqondiso ngo-Agasti 24
abantu abazalwe ngoJanuwari 27